10/02/2016 – Gentleman Magazine
အတုယူစရာ သန်းကြွယ်သူဌေးတို့၏ အမူအကျင့်(၅)ခု
အတုယူစရာ သနျးကွှယျသူဌေးတို့၏ အမူအကငျြ့(၅)ခု သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါသလား? သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် လက်ရှိ သန်းပေါင်းများစွာ ချမ်းသာကြွယ်ဝနေသူတွေကို လေ့လာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်တွေအတိုင်း ကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင် သင်လည်းပဲ ဂဏန်းခုနှစ်လုံးပိုင်ဆိုင်မှုကို ရရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူအများစု လုပ်ဆောင်လေ့မရှိပဲ သန်းကြွယ်သူဌေးတွေပဲလုပ်ဆောင်လေ့ရှိတဲ့ အမူအကျင့်(၅)ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။
အတိုင်ပင်ခံဆရာတစ်ယောက်နဲ့ လက်တွဲနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းများ
10/02/2016 23/05/2017 Admin
အတိုငျပငျခံဆရာတဈယောကျနဲ့ လကျတှဲနိုငျဖို့ နညျးလမျးမြား အတိုင်ပင်ခံဆရာတစ်ယောက်နဲ့ လက်တွဲနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းများ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ စတဲ့ ဘယ်နယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အကြံပြု လမ်းညွှန်ဆုံးမပေးနိုင်မယ့် ဆရာကောင်းသမားကောင်းရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အတိုင်ပင်ခံ ဆရာကောင်းတစ်ယောက်ရှိထားခြင်းက အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခြေလှမ်းသစ်တွေ စတင်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီတော့
သူမ စိတ်မပါရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ ?
သူမ စိတျမပါရငျ ဘာလုပျကွမလဲ ? နှစ်ဦးသား ချစ်တင်းနှောဖို့ကိစ္စကို သင်က စိတ်ပါနေမယ်။ ဒါပေမယ့် သူမက စိတ်မ၀င်စားဘူး။ ဒါမှမဟုတ် သူမက စိတ်ပါနေပြီး သင်က………. စိတ်မပါတဲ့အချိန်များ ရှိလို့လား။ အမြဲတမ်းတက်ကြွနေတတ်တာပဲ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ပါတနာမိန်းကလေး စိတ်မပါဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမလဲ။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း လည်တိုင်လေးကို
စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်း (၉) ခု
စိတျဖိစီးမှုကို ဖွရှေငျးဖို့ နညျးလမျး (၉) ခု စိတ်ဖိစီးမှုဟာ အလုပ်ပြီးမြောက်နိုင်စွမ်းနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအောင်မြင်မှုအတွက် အဟန့်အတားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ပါးသက်သာအောင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကို အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲပြီးအောင်မြင်မှုတွေ ရရှိစေဖို့ အောင်မြင်နေသူတွေရဲ့ နည်းလမ်းအချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ပြဿနာတွေကို ရှုထောင့်ပြောင်းကြည့်ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာပြီဆိုတာနဲ့ အဆိုးမြင်လာပြီး
လက်ထပ်ဖို့အတွက် အဆိုးရွားဆုံး အကြောင်းပြချက် ၁၀ မျိုး
လကျထပျဖို့အတှကျ အဆိုးရှားဆုံး အကွောငျးပွခကျြ ၁၀ မြိုး လက်ထပ်တာဟာ ချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက် အဆုံးစွန် ချစ်ကြင်နာမှု ပြခြင်းပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒိ နောက်ဆုံးအဆင့်ကို မတက်လှမ်းမီ သင် ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာ သင် သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လက်ထပ်တာဟာ ကလေးကစားစရာ မဟုတ်ပါဘူး။ စုံတွဲတွေဟာ လက်ထပ်ခြင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့
သင့်ချစ်သူကို မဆုံးရှုံးစေပဲ သင့်အိပ်မက်နောက် ဘယ်လို လိုက်ရမလဲ